Radinta Shubuhaatka (Ismoodsiin) | Gaaldiid
Radinta Shubuhaatka (Ismoodsiin)
Bogga Hore > Radinta Shubuhaatka (Ismoodsiin)
Shubuhaatka ama Ismoodsiinta Q 1aad
Qeybta koowaad ee barnaamijka lamagac baxay Shubuhaatka, waxa xalqada koowaad kusoo qaadanaynaa farsamooyinka cusub ee ay adeegsadaan nasaaradu si ay diinta uga saaran Muslimiinta, ayagoo adeegsanayo kaarto iyo xeelado aad u heer sareeya. Inshallah...
Muxuu Quraanka Kariimka ah ka yidhi kitaabka Injiilka?
Radinta maqaalkii ahaa Muxuu Quraanka Kariimka ah ka yidhi kitaabka Injiilka?
Muslimiintu Ma Kacbada ayey caabudaan? Radinta Ismoodsiinta
Tusmo1 Su’aal:2 Jawaab: Su’aal: Hadii Islaamku uu kasoo horjeedo sanamyada oo uu dhaleeceeyeyna, maxay Muslimiintu u caabudaan ama ugu sujuudaa Kacbada? Jawaab: Kacbadu waa qiblada Muslimiinta waana jihada loo jeesto kolka la tukanayo. Waxaana...
Waakuwama Quraaniyiintu? Waamaxay Kooxdan xalaashatay Heesaha? Waamaxay Ujeedadoodu? Maxay Diinta Islaamku ka qabtaa fikirkan?
Shiicadu waayo? Sheekh Umal
Tusmo1 Baro Shiicada iyo waxay aaminsanyihiin1.0.1 Qodobada ugu muhiimsan ee muxaadarada Sheekh Muxmaed Cabdi Umal Baro Shiicada iyo waxay aaminsanyihiin Qodobada ugu muhiimsan ee muxaadarada Sheekh Muxmaed Cabdi Umal Yaa sababay in Shiicadu soo...
Muxuu Nabigu U guursaday Caasha ayadoo aad u yar?
Shubuhaat: Muxuu Nabigu u guursday gabadh aad u da'yar? Akhriso ama Daawo.
Nabi Muhamed Muxuu u guursaday Xaasas badan? Radinta Ismoodsiinta.
Muxuu Nabi Muhamed (N.N.K.H) u guursaday haween badan ayadoo Raga muslimka ah loo ogolyahay Afar haweem oo kaliya?